အခမဲ့ 2048 App ကို | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » ပျော်စရာ & ဂိမ်းများ » 2048
2048 APK ကို
အဆိုပါ 2048 ဂိမ်းစူပါအေးနှင့်စွဲလမ်းပါ! ဒီနံပါတ်ကိုပဟေဠိပေါ်မှပျော်စရာပျော်ရွှင်ခံစားပါ! ဒါက 2048 ဂိမ်းမူရင်းလူကြိုက်များ 2048 ဂန္ app ကိုတစ်ခုအဆင့်မြှင့်ဗားရှင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာဂန္ (4 × 4) ဘုတ်အဖွဲ့အရွယ်အစားရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်လည်း, (3 × 3) သေးငယ်တဲ့ (5 × 5) ကြီးတွေ, ပိုကြီး (6 × 6), နှင့်ကြီးမား (8 × 8) ဘုတ်အဖွဲ့အရွယ်အစားကို support မသာ။ ဒါဟာတကယ့်စူပါ 2048 ပဟေဠိပဲ! အကောင်းဆုံးစံချိန်အသစ်တစ်ခုစိန်ခေါ်မှုအဘို့ပြင်ဆင်ခံရ!
အဆိုပါအုပ်ကြွပ်ရွှေ့ဖို့ပွတ်ဆွဲပါ (Up ကို, Down, လက်ဝဲ, လက်ယာ) ။ တူညီသောအရေအတွက်က touch နဲ့အတူလိုက်တဲ့အခါနှစ်ခု, သူတို့ကတဦးတည်းသို့ပေါင်းစည်း။ တိုင်းပွတ်ဆွဲပြီးနောက်အသစ်တခု tile ကိုဘုတ်အဖွဲ့အပေါ်တစ်ဦးကိုကျပန်းဗလာအစက်အပြောက်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။2tile ကိုနေသူများကဖန်တီးသောအခါ,2+4= 4,4+ 8 = 8, 8 + 16 = 16, 16 + 32 = 64 ... 128 ... 256 .. 512 .. 1024 .. 2048 ... သူတို့ကိုပေါင်းစည်းဖို့ဆဲလ်တွန်း သငျသညျအနိုင်ရ!
သင့်ဦးနှောက်လေ့ကျင့်ပါကကျော်စဉ်းစားသောကြောင့်ကစားသိမ်းဆည်းထားပါ, သင်သည်ဤပျော်စရာပဟေဠိ app ကိုတစ်လိုလားသူဖြစ်လိမ့်မည်။ လူအပေါင်းတို့သည်အေးမြသင်္ချာဂိမ်းများ, အရေအတွက်အားဂိမ်းများနှင့်ယုတ္တိဗေဒပဟေဠိ apps များအကြား, ဒီအခမဲ့ 2048 ပေါင်းစူပါဂိမ်း, သင်သည်သင့်ဦးနှောက်လေ့ကျင့်သင်ကြားရကထဲကပျော်စရာ get နှင့်သင်စဉ်းစားပါစေနိုငျသောရဆုံးစွဲလမ်း App ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဟာအရွယ်ရောက်ပြီးသူအဘို့, ဆယ်ကျော်သက်, ဒါပေမယ့်လည်းကလေးတွေအဘို့မသာရဲ့ကစားရန်ဒါရိုးရှင်းပါသည်။
, ထိုနံပါတ်များကိုပေါင်းစပ်နှင့်ပူးပေါင်းရန်, မျက်နှာပြင်တွန်း 128, 256, 512, 1024 ရနှင့်နောက်ဆုံးမှာအနိုင်ရ!
ယခု Download! ဒီကြောက်မက်ဘွယ်ကစားပြီးတော့သင်နံပါတ်များကိုဝင်ရောက်ရာမှယုတ္တိဗေဒပျော်စရာရနိုငျသညျ, နံပါတ်များပေါင်းစည်းနှင့်အေးမြသင်္ချာယုတ္တိဗေဒကြုံနေရ, 2048 ပဟေဠိဂိမ်းလျှော့ပေါ့စတင်ပါ။ အကောင်းဆုံးကိုရမှတ်ရောက်ရှိနိုင်သူကိုမြင်ရဖို့သင့်သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူယှဉ်ပြိုင်ပါ။
အဆိုပါအမှတ်သင်ပုန်းဝင်ရောက်ဖို့, သင်သည်သင်၏ Google Plus အကောင့်ထဲမှာလက်မှတ်ရေးထိုးရန်လိုအပ်သည်။
- အဆုံးမဲ့ mode ကို။ 2048 tile ကိုမှာအနိုင်ရပြီးနောက်, သငျသညျထပ်မံသွားနိုင်ပါတယ်နှင့် 4096, 8192, 16384, 32768, 65536, 131072 စိန်ခေါ် ... အဆုံးမဲ့နှင့်န့်အသတ်ပါ!
- ဂန္တဝင် (4 × 4), အသေး (3 × 3), ကြီးကြီး (5 × 5), ပိုကြီး (6 × 6) နှင့်ကြီးမား (8 × 8) ပျဉ်ပြား!
- တစ်ဦးကပြန်လုပ်ရန်ထောက်ခံမှုရွှေ့။ သင်သည်သင်၏နောက်ဆုံးအပြောင်းအရွေ့ကိုပယ်ဖျက်ဖို့ပြန်လုပ်ရ function ကိုသုံးနိုင်သည်။
- တင့်တယ်ခြင်းနှင့်ရိုးရှင်းသော UI ကိုချောမွေ့ animations တွေကို
- မူရင်း mode ကိုပေါင်းသည်အခြား4အသစ်က Modes သာများအတွက်အမှတ်သင်ပုန်း။
- ဟာ android ဗားရှင်းအထက်တွင် 2.1 နှင့်ထောက်ပံ့
ဒါကြောင့်အနည်းဆုံးဗလာအစက်အပြောက်ရှိပါတယ်ကတည်းကသေးငယ်တဲ့ mode ကိုသုံးများပြားသုံးခု (33x), အခက်ခဲဆုံး mode ကိုဖြစ်တယ်, ဒါရွှေ့ဖို့သင့်ရဲ့အာကာသသည်အခြား Modes သာထက်ကန့်သတ်သည်။ ဒါပေမယ့်သင်ပိုမိုစိန်ခေါ်မှုပေးသည်, ကကြိုးစားပြီး!
တခြားဂိမ်းတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ဟာ android မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်အပေါ်အလွန်ကောင်းသောစွမ်းဆောင်မှုရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့သည်ဇာတိကုဒ်အတွက်အခမဲ့အေးမြသင်္ချာနဲ့အရေအတွက်က app ကိုဒီဇိုင်းနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရန်။
ကအခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်ကတည်းက, ငါတို့သည်ပေါ်မှာကြော်ငြာထား, သင်သာဖန်သားပြင်တစ်ခါတစ်ရံအကူးအပြောင်းအခါ, သင်နှောင့်ရှက်မည်မဟုတ်မျှော်လင့်ပါတယ်မြင်ရလိမ့်မည်။
1 ပိုပြီးအခမဲ့ပြန်လုပ်ရ Add
ဗီဒီယိုတစ်ကားကိုအေဒီစောင့်ကြည့်ပြီးနောက်, သငျသညျ3နာရီ2အပို undo ဆုခခြဲ့ပါလိမ့်မည်။
2.63 ကို MB
RIKUDO ပဟေဠိ - ...
Glow ရှုပ်ထွေးစေပါတယ်: ...
သင်္ချာ 24 - စိတ်ကျန်းမာရေး ...